Bajaajle ay shaqo-la’aan ku qasabtay inuu qoyskiisa dib ugu celiyo xero barakac - Radio Ergo
(ERGO) – Xasan Maxamed Yuusuf oo ah 25 sano jir wuxuu nolosha hooyadiis iyo afar gabdho ah oo la dhashay ka maareyn jiray $150 oo uu bishii ka heli jiray wadista mooto bajaajta. Wuxuu ka howlgeli jiray magaalada Muqdisho balse sare-u-kac ku yimid qiimaha shidaalka ayaa ku qasbay inuu iska dhaafo shaqadiisa.
Ninkaan dhallinyarada ah ayaa markii uu shaqeynayay ku filnaa bixinta kirada guriga, raashinka qoyska iyo lacagta waxbarashada gabdhaha walaalihiisa ah oo ahayd $40 bishii.
Xasan ayaa sheegay in saacadihii uu shaqeynayay uu wax ku kordhiyay ka hor intii uu go’aansan inuu shaqada joojiyo, balse wax faa’ido ah uu ka heli waayay.
Sare-u-kaca shidaalka oo soo billowday bishii Maarso ee sanadkaan ayaa ku qasbay in qoyska ay dib ugu laabtaan xero barakac ah oo ay sanad ka hor ka soo guureen.
“Markii hore halkii litir oo shidaal ah waxaan ka bixin jirnay lacag dhan nus doollar, haddana waxaa uu marayaa hal doollar iyo bar,” ayuu yiri.
“Mootada maalinkii waxaan bixinayay $10 oo kiro ah. Mararka qaar waddooyinka way xirmaayaan oo ciidamada dowladda ayaa xirta, kaddibna waxaa la dhex marayaa xaafadaha oo bajaajta shidaal badan ayay cunaysaa.”
Qoyskaan waxay hadda ku tiirsan yihiin hooyadiisa oo 56 jir ah oo ka soo shaqeysa dhar-u-dhaqista qoysas deggan xaafadaha Muqdisho.
Xasan ayaa tilmaamay in hoyadiis ay joojisay inay shaqeyso 2019-kii, kaddib markii uu isagu billaabay wadista mooto bajaajta. Dhar-dhaqistu ma aha shaqo ay maalin kasta hesho. Hase yeeshee maalinta ay u suurtagasho waxay ka soo heshaa marka ay ugu badan tahay 100,000 oo shillin Soomaali ah ($4).
Bishii Luulyo ee sanadkaan ayay qoyska dib ugu laabteen xerada barakaca ee Dayax, markii ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan kirada gurigii ay deggenaayeen oo $25 ahayd.
Gabdhaha walaalihiisa ah ayaa sidoo kale ka haray waxbarashadooda. Xasan, wuxuu hadda raadinayaa shaqooyin xoogsi ah si uu nolosha qoyska wax uga beddelo.
“Carruurtii waxbarashadoodii way istaagtay, waxaa ugu dambeysay maalinkii aan shaqada joojiyay oo aan mootada u geeyay ninkii iska lahaa,” ayuu yiri Xasan oo ay murugo ka muuqato.
Xasan iyo qoyska ayaa markii ugu horreysay ku biiray xerada Dayax kaddib markii ay fatahaadda webiga Shabeelle ka soo barakicisay degmada Afgooye 2019-kii.
Wuxuu xusay in isaga iyo hooyadiis ay ka shaqeyn jireen beer ku taalla degmada Afgooye oo ay lahaayeen dad ehel la ah, tan iyo markii uu aabbahooda dhintay 2017-kii. Balse webiga ayaa ku fatahay beertaasi.
“Xerada Dayax waxaan ka soo guurnay markii aan helay mootadaan oo si kiro ah la igu dhiibay 2019-kii. Waxaan ahaa mid ku filan maamulka qoyska iyo maareyntiisa. Shaqadaan markii aan billaabayay waxaan rajeynayay in aan aniga mid gadan doono mustaqbalka.”
Wuxuu xusay in ganacsatada shidaalka ay u sheegeen in ceelashii shidaalka ee Sucuudiga oo Xuutiyiintu ay weerareen iyo xanuunka COVID-19 ay sabab u tahay sare-u-kaca qiimaha shidaalka.